६ लाखको कोरोना परीक्षण पीसीआर विधिबाट गर्ने सरकारी लक्ष्य, २ लाखको बल्ल सकियो, ४ लाखको अझै कहिले ? (भिडियो) – Sandesh Munch
June 27, 2020 135
काठमाडौं, १२ असार । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ लाख मानिसको कोरोना संक्रमण पीसीआर बिधिबाट परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ ।
नेपालको कूल जनसंख्याको २ प्रतिशत मानिसको पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने उदेश्य सहित शुक्रबार १० वटा ल्याबहरु थप गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकारी दिएको छ ।
हाल दैनिक पीसीआर विधिबाट७ हजार जनाको कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । शुक्रबारसम्म २ लाख ६ हजार २ सय ७१ जनाको कोरोना संक्रमण परीक्षण भएको छ ।
६ लाख मानिसलाई पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब ४ लाख मानिसको कोरोना परिक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
४ महिनामा २ लाख ६ हजार कोरोना परीक्षण गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब ४ लाख मानिसको परीक्षण कहिले सिध्याउँछ शंकाको बिषय त बनेको छ नै, तर पछिल्लो समय परीक्षण भने बढेको छ । परीक्षण बढेसंगै दैनिक ५ सयको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित पहिचान हुन् थालेका छन् ।
शुक्रबारबाट देशभर १० ल्याब थप गरेर कोरोना परिक्षण पिसिआर गर्ने ल्याबको संख्या ३३ पुगेको छ ।
हाल करिब ८० हजार मानिस क्वारेन्टाइनमा छन् । क्वारेन्टाइनमा रहेकाको पीसीआर परीक्षण पहिलो चरण सक्ने र त्यसपछि अन्य ३ लाख ४० हजार संक्रमणको शंका लागेका मानिसको परीक्षण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, देशका ३३ ल्याबले लक्ष्य अनुरुप परीक्षण गर्न कम्तिमा ४ महिना लाग्ने बिज्ञहरु बताउछन् ।
निजी क्षेत्रको ल्याबलाई परीक्षणको अनुमति दिने भनिएपनि शुल्कमा कुरा मिलेको छैन । सरकारले निजी ल्याबलाई ५ हजार ५ सय शुल्क लिएर पीसीआर गर्न दिने निर्णय गरे पनि निजी ल्याब र अस्पताल संचालकहरु उक्त शुल्कमा परीक्षण गर्न नसकिने बताइरहेका छन् ।
Prevभारतमा यात्रुवाहक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध १५ जुलाई सम्म बढाइयो
Nextकोरोना जितेर रमाउँदै घर फर्किए ३ वर्षीय बालकसहित २७ संक्रमित
यो साता चम्किने छ यी ९ राशिको भाग्य, तपाईको राशि कुन ?
आज – २५ आश्विन आइतवारको राशिफल